उपसभामुखले भनिन् ‘मेरो सर्त पुरा गरे मात्रै राजिनामा दिन्छु’, यस्तो छ उनको सर्त – " सुलभ खबर "
उपसभामुखले भनिन् ‘मेरो सर्त पुरा गरे मात्रै राजिनामा दिन्छु’, यस्तो छ उनको सर्त
काठमाडौं ,३ पुस । उपसभामुख डा।शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पदवाट राजिनामा दिन एउटा सर्त अघि सारेकी छन् । उनले संसद वैठक सुरुवात भएपछि मात्र आफुले राजिनामा दिने सर्त राखेकी छन् । तीन महिना देखि रिक्त रहेको सभामुख पदका लागि नेकपाले नयाँ उम्मेदवार खोजेको छ । सभामुखको लागि दावेदारी प्रस्तुत गर्दै आएकी शिवमायाको माग सुनुवाई नभएपछि सर्त अघि सारेकी हुन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा बैठकको शुरु र अन्त्य सभामुखले गर्ने भनिएको छ । सभामुख नभएको अवस्थामा उपसभामुखले गर्ने भन्नेबारे नियमावली नबोलेको भएपनि रोकेको पनि छैन । सभामुख र उपसभामुख दुवै नभएको अवस्थामा भने जेष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्ने भनिएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाले सभामुख निर्वाचनका लागि उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गर्न लगाएर दुवै पदमा नयाँ ब्यक्ति ल्याउने तयारी गरेको छ । तर सभामुखको टुंगो अझै लगाउन सकेको छैन । पहिलो बैठकको शुरु गरेरमात्र राजीनामा दिने उनको चाहना अनुसार संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सहजीकरण गरिदिए पछि नेकपालाई सभामुख छनोट गर्न बाटो खुलेको छ ।
नेकपाका दुई अध्यक्ष कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने विषयमा छलफलमा छन् । तुम्बाहाम्फेले बिधेयक प्रमाणिकरण बाहेक सभामुखले गर्ने सबै काम गर्न थालेपछि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले बिरोध गरेको छ । सभामुखकै हैसियतामा उनले गरेको सूचना आयोगका पदाधिकारीको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर भइसकेको छ । तुम्बाहाम्फेले बैंठकको शुरुवात गरी सभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि आफुले राजीनामा लिने बताएकी छिन् । नेकपालाई भने कसलाई सभामुख पद दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न गाह्रो भएको छ ।
सागमा कञ्चनपुरलाई १८ पदक
कञ्चनपुरबाट दक्षिण एशियाली खेलकूद ( साग) अन्र्तगत कुस्ती खेलमा नेपालकै सबैभन्दा बढी महिला खेलाडी सहभागी भए । सो प्रतियोगिताको कुस्ती खेलमा पदक पनि सम्मानजनक ल्याउँदा कञ्चनपुरको खेलकूद जगतमा नयाँ इतिहास कायम भएको छ ।
विभिन्न सात तौल समूहमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै कुस्तीमा सहभागी महिला खेलाडीमध्ये ६ जना भीमदत्तनगरका सहभागी थिए । खेलमा सहभागी ६ मध्ये सङ्गीता धामीले बङ्गलादेशकी खेलाडीलाई पराजित गर्दै स्वर्ण जितेर कुस्तीमा इतिहास रचिन् । बाँकी पाँचजना यहाँका महिला कुस्ती खेलाडीले पनि पदक दिलाएका छन् ।“सबै खेलाडीले स्वदेशमै प्रशिक्षणमा जुटेर कडा मेहनत गरेकै परिणामले पदक ल्याए”, कुस्तीका सहायक प्रशिक्षक राजेन्द्र चन्दले भन्नुभयो,“यो अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक पदक हो ।”
त्यसैगरी महिला कुस्तीमा यहाँका शिवाङ्गी दुबे, अम्बिका भण्डारी र निर्मला जागरीले रजत पदक ल्याउन सफल हुनुभयो । कञ्चनपुरकै कोमल खत्री र मनिशा सिंहले कास्य पदक जिते भने पुरुषतर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्रतिनिधित्व गरेका कञ्चनपुरका सुरेश चुनाराले पनि कास्य पदक हात पार्न सफल भए । “महिलातर्फ पदक ल्याउने सबै खेलाडी नयाँ नै हुन”, कुस्ती प्रशिक्षक चन्दले भने,“अन्र्तराष्ट्रियस्तरको पहिलो सहभागितामै पदक ल्याउनु सामान्य विषय होइन् ।”
उहाँले कञ्चनपुरमा कुस्तीका लागि आवश्यक हल र खेल सामग्रीबिनै खेलाडी अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म पुगेकोमा हर्षित रहेको बताउनुभयो ।“वृहत् आठौं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा यहाँका महिला खेलाडीले देखाएको प्रदर्शनले नै सागमा पदकबिहीन हुनुपर्दैन भन्ने लागेको थियो ।” उनले भने,“सङ्गीताको स्वर्ण नेपालकै कुस्ती इतिहासमा पहिलो भएको छ ।”
त्यसैगरी जिल्ला खेलकूद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख गोपालदत्त भट्ट पनि सागमा यहाँका खेलाडीले ल्याएको पदक र देखाएको प्रदर्शनले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र “सागमा यसअघि पनि यहाँका खेलाडीले पदक ल्याएकै हुन”, पदक विजेताको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहनुभएको कार्यालय प्रमुख भट्टले भने,“यो पदक हालसम्मकै बढी हो ।” जिल्ला खेलकूद विकास समितिका अनुसार कञ्चनपुरका खेलाडीले चार स्वर्णसहित १८ पदक ल्याएका छन् । कुस्तीमा सङ्गीता धामी, तेक्वान्दोमा वीरबहादुर महरा, उसुमा करनसिंह साउद र ट्राइथलनमा हिमाल टमटाले स्वर्ण जितेका हुन ।
पुनः कडा लकडाउन गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि पुनः लकडाउन हुनसक्ने तर्फ सबैलाई सचेत गराएको छ
कोरोना भाइरस नेपाल: दशैँको मुखमा निषेधाज्ञाबारे काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख के भन्छन्
काठमाण्डू उपत्यकामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या व्यापक रूपमा बढिरहेको छ।पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार उपत्यका का तीन जिल्लामा
नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या ७५ हजार नाघ्यो, कुन प्रदेशमा कति ? (पछिल्लो विवरणसहित)
काठमाडौं । नेपालमा बितेको २४ घण्टामा थप १ हजार ५ सय ५२ जना कोरोना संक्रमण
काठमाडौं, २५ असाेज । नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूभागको विषयमा ऐतिहासिक प्रमाण जुटाएको छ
मध्यरातमा ८ बुँदे सहमति, डा केसीले आज अनशन तोड्दै (सहमतिकाे पूर्णपाठसहित)
काठमााडौं, २५ असाेज । अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच मध्यरातमा ८ बुँदे सहमति भएको
काठमाडौंमा थप ३ जनाको मृत्यु, थपिए २१ सय जना कोरोना संक्रमित
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं जिल्लामा मात्रै थप २१ सय जना कोरोना संक्रमित थपिएका
चीनको आक्रमक अभियान ! प्रतिव्यक्ति आय चार वर्षमै दोब्बर, पाँच करोड जनसंख्या गरिबीबाट मु’क्त
जो आफूसँग भएको १५ लाख रूपैयाँ खर्च गरेर संक्रमितलाई निःशुल्क खुवाउँछन्
काठमाडौंमा कुखुराको मासु तीन वर्षयताकै सस्तो, एक महिनामा तीन पटक मूल्य घट्यो
दसैं आउन दुई साता मात्र बाँकी : स्वदेशमा भोकमरी भएपछि मजदुरी गर्न भारत जानेको लर्को
कपाल झरना रोकिएन, के खाने ? यस्तो छ आन्द्रा र कपाल झर्ने समस्याको सम्बन्ध